Deg Deg Khilaafka Imaaraadka & Turkiga oo Sii Xoogaystay. | ogaden24
Deg Deg Khilaafka Imaaraadka & Turkiga oo Sii Xoogaystay.
Wadanka Turkiga ayaa si rasmi ah u badalay astaanta wadada ay ku taallo saraafadda dalka Isu-taga Imaaraatka Carabta uu ku leeyahay magaalada Ankara, ka dib hadal dhaliyay khilaaf diblumaasiyadeed oo labada dal soo kala dhexgalay.
Wadada waxaa loogu magacdaray Fahreddin Pasha, kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraatka uu internetka ku baahiyay isagoo cambaareynaya sarkaalka oo horay uga tirsanaa nidaamkii Cusmaaniyiinta. Cabdallah bin Zayed al Nahyan wuxuu bartiisa Twitter-ka ku qoray eedeyn uu u jeedinayo Pasham iyo awoowayaasha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Mr Erdogan ayaa si adag uga jawaabay eedahaasi. Farriinta Twitter-ka waxay sheegeysaa in Pasham uu si xun ula dhaqmay Carabta muddadii uu maamulayay magaalada Madina, horraantii qarnigii 20-aad, wuxuuna sheegay “in ciidammadii ninkaasi ay xidhiidh la leeyihiin Mr Erdogan.”
Madaxweynaha Turkiga ayaa difaacay barasaabkii hore ee magaalada barakeysan ee Madina, wuxuuna su’aal geliyay jiritaanka awoowayaasha wasiirka Imaaraatka. Mr Erdogan wuxuu wasiirka u sheegay “in uu shaqadiisa garto” oo shimbirba shimbirkiisa uu la duulo. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in eeda ay tahay “aflagaado”. Erdogan ayaa dalka Imaaraatka ku tilmaamay meel ay kharibeen “lacag iyo shidaal”. Diblumaasi sare oo Turkiga ka joogay Dubai ayaa looga yeedhay Ankara si uu cabasho rasmi ah u gudbiyo.
Xidhiidhka ka dhexeeya labada dal ayaa xumaanayay bilihii ugu dambeeyay ka dib markii Turkiga uu la saftay Qadar oo khilaaf adag uu kala dhexeeyo wadamada khaliijka oo ku eedeeyeen in Doxa ay argagixisada taageerto. Maayarka magaalada Ankara ayaa bartiisa bulshada ku xaqiijiyay in magaca waddada la bedelay.